China C-Fold / Multifold Paper Towel Dispenser - Polished 304 Grade Stainless Steel Wall Mount Tissue Holder ho an'ny Countertop & trano fidiovana mpanamboatra sy mpamatsy | Juyuan
C-Fold / Multifold Paper Towel Dispenser - Voaporitra 304 Grade Stainless Steel Wall Mount Tissue Holder ho an'ny Countertop & Toeram-pisakafoanana an-trano sy birao
Item: Dispenser taratasy lamba famaohana
Item No.: 4AK40
1. fanorenana mafy: mateza naorina tamin'ny Premium SUS304 Stainless vy. Ny endri-javatra manohitra ny harafesina sy ny anti-corrosion amin'ny vy tsy misy vy dia miantoka ny fiainany maharitra. Habe manontolo: 285 * 100 * 260MM. Lanjan'ny harato: 3,54 kilao. Ny famolavolana fiarovana amin'ny fanakatonana, misy fanalahidy, mba hisorohana ny fanodinkodinana sy ny fanimbana, izay mety amin'ny toerana ho an'ny daholobe.
2. Fisehoan-tarehy madio: Ny tampon'ny poloney sy ny matt surface dia misy, na inona na inona ny poloney surface na matt surface dia afaka manome endrika madio sy maoderina izay hanazava ny trano fidiovana rehetra. Vita amin'ny haingon-trano mahitsizoro fitanana lamba famaohana taratasy misy fisokafana lehibe ho an'ny fidirana haingana sy mora.
3. Habe lehibe, mety amin'ny trano, birao, sekoly, banky, trano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana, hopitaly, bar, sns. Ny endrika madio sy malala-tanana, tsara kokoa amin'ny fampidirana ny fomba haingon-trano maoderina amin'ny trano fidiovana, dia manampy teboka amin'ny sarin'ny orinasanao.
4. Large capacité: Mahazaka hatramin'ny 300 eo ho eo ny servieta multi-Fold taratasy, miantoka fa ny tsirairay dia afaka mahazo tokan-tena ho an'ny vahiny servieta tanana lamba famaohana tsy refill matetika. Mora ny famenoana amin'ny fampiasana ny fanalahidin'ny hidin-trano. Ary tsy mila manahy momba ny fahavoazana ratsy. Misy banga eo anoloana mba hijerena ny habetsaky ny lamba famaohana, tsy mila manokatra ny sarony mba hanamafisana.
6. Manatsara ny fahadiovana: Ny mpanjifa dia afaka maka ny lamba famaohana taratasy mivantana tsy mikasika ny dispenser servieta taratasy, amin'izany dia manatsara ny fahadiovana sy misoroka ny otrikaretina bakteria. Ilaina amin'ny orinasanao ny famoronana traikefa amin'ny efitra fandroana madio sy avo lenta.
7.100% antoka fahafaham-po amin'ny mpanjifa: Miezaka izahay hanome vokatra avo lenta sy serivisy tsara. Aza misalasala mifandray aminay raha manana olana amin'ity dispenser servieta ity ianao.
teo aloha: Fihazonana taratasy fidiovana loha roa miaraka amin'ny talantalana mainty matte, SUS304 Stainless vy tsy misy vy amin'ny efitra fandroana maoderina Roll holder fitehirizana finday.
Manaraka: Taratasy Tissue ara-barotra Jumbo Toilet Paper Dispenser Stainless Steel ho an'ny fampiasana ara-barotra na trano ampiasaina amin'ny rindrina amin'ny Key & Lock
Taratasy fidiovana Fihazonana Tasy efitra fandroana Pape...
Taratasy fidiovana miendrika rindrina rindrina…